Kedu ihe bụ na olee otu usoro heliocentric si arụ ọrụ? Network Meteorology
Na mbara ala nke usoro mbara igwe na-agagharị gburugburu kpakpando a na-akpọ Anyanwụ amabeghị nke ọma. E nwere echiche na ụwa bụ etiti nke Eluigwe na Ala na ụwa ndị ọzọ gbara ya gburugburu. Ozizi heliocentric Nke anyị ga-ekwu maka ya taa bụ nke Anyanwụ bụ etiti ụwa na ya bụ kpakpando kwụ ọtọ.
Onye mepụtara echiche heliocentric na gịnị na ọ dabere na ya? N’isiokwu a, ị ga-enwe ike ịmata n’ụzọ miri emi ntọala ya sitere na sayensị. Yoù ga-achọ ịmata ya nke ọma? Naanị ị ga-anọgide na-agụ 🙂
1 Njirimara nke heliocentric theory
2 General ụkpụrụ nke tiori
3 Esemokwu dị n'etiti etiti heliocentric na geocentric
3.1 Nkowa akparamagwa nke mbara ala
Njirimara nke heliocentric theory
N'ime narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX, e nwere mgbanwe mgbanwe sayensị nke chọrọ ịza ajụjụ ndị ahụ niile gbasara Eluigwe na Ala. Ọ bụ oge mmụta na nchọpụta nke ụdị ọhụụ ọhụụ. Ejiri ụdị ndị ahụ ka ha nwee ike ịkọwa ọrụ nke mbara ala n'ihe gbasara Eluigwe na Ala.
N'ihi physics, mgbakọ na mwepụ, bayoloji, onwu na mbara igwe nke mere ka o kwe omume ịmara ọtụtụ ihe gbasara Eluigwe na Ala. Mgbe anyị na-ekwu maka ịgụ kpakpando, onye sayensị pụtara ìhè bụ Nicolaus Copernicus. Ọ bụ onye okike nke heliocentric theory. O mere ya site na nchọpụta na-aga n'ihu na mmegharị nke mbara ala. O dabere na njirimara ụfọdụ nke echiche mbụ nke geocentric iji gbaghaa ya.
Copernicus mepụtara ihe nlere anya nke kọwara ọrụ nke Eluigwe na Ala. O kwuru na ngagharị nke mbara ala na kpakpando gbasoro ụzọ yiri nke kpakpando buru ibu. Ọ bụ maka Sun. Iji gbaghaa echiche nke mbụ banyere mbara ala, ọ jiri nsogbu mgbakọ na mwepụ wee tọọ ntọala maka mmụta mbara igwe nke oge a.
Ọ ga-kwuru na Copernicus abụghị onye ọkà mmụta sayensị mbụ tụrụ aro ka heliocentric bụrụ ihe atụ nke mbara ala gbara gburugburu Anyanwụ. Agbanyeghị, n'ihi ntọala sayensị ya na ngosipụta ọ bụ akụkọ ọhụụ na usoro mmụta oge.
Ozizi nke na-anwa igosi mgbanwe na nghọta nke ụdị akụkụ a na-emetụta ọnụ ọgụgụ mmadụ. N’otu aka, e nwere oge ndị ndị na-enyocha mbara igwe kwuru banyere idozi nsogbu nke mgbakọ na mwepụ ka ha ghara ịhapụ ịhapụ ihe ndị metụtara mbara ala. Ma ha enweghị ike ịgọnahụ na ihe nlereanya Copernicus nyere mere ka anyị nwee echiche zuru oke banyere ọrụ nke Eluigwe na Ala.
General ụkpụrụ nke tiori
Usoro heliocentric na-adabere n'ụkpụrụ ụfọdụ iji kọwaa ọrụ niile. Principleskpụrụ ndị ahụ bụ:
Ahụ ndị dị na mbara igwe ha adịghị agba gburugburu n'otu isi ihe.
Etiti ụwa bụ etiti nke amị n'ọnwa (gburugburu nke ọnwa na ụwa)
Akụkụ niile na-agba gburugburu Sun, nke dị nso na etiti ụwa.
Oghere dị n’etiti Earthwa na Anyanwụ bụ akụkụ dị ntakịrị nke ụzọ si andwa na Anyanwụ ruo na kpakpando, ya mere, anaghị ahụ parallax na kpakpando.
Kpakpando enweghị ike imegharị, ihe ọ na-eme kwa ụbọchị na-akpata site na ntụgharị ụwa kwa ụbọchị.
Moveswa na-agagharị n'okirikiri gburugburu Sun, na-eme ka Sun na-egosi kwa afọ Mbugharị. Thewa nwere ihe karịrị otu ngagharị.
Mgbagharị nke orwa gburugburu nke Sun na-eme ka mgbapụ pụtara na ngagharị nke mbara ala.
Iji kọwaa mgbanwe n'ọdịdị nke Mercury na Venus, a ga-enyerịrị okirikiri nke ọ bụla n'ime ha. Mgbe otu onye n’ime ha nọ n’akụkụ kachasị anya site na Sun maka mmekọrita na ụwa, ọ na-adị obere. Agbanyeghị, enwere ike ịhụ ha n'uju. N’aka nke ọzọ, mgbe ha nọ n’otu akụkụ Anyanwụ na ụwa, oke ha dị ka o buru ibu ma ọdịdị ha na-abụ ọkara ọnwa.
Ozizi a na-akọwa n'ụzọ zuru oke ngagharị nke mbara ala dịka Mars na Jupita. O gosiputara nke oma na ndi na-enyocha mbara igwe n’uwa enweghi ebe ha na-ano ama. Kama nke ahụ, ụwa na-eme ngagharị mgbe niile.
Esemokwu dị n'etiti etiti heliocentric na geocentric
Ihe omuma ohuru a bu ngbanwe zuru oke nke sayensi. Modeldị gara aga, nke geocentric, dabere na ụwa bụ etiti nke Eluigwe na Ala na Sun na mbara ala gbara ya gburugburu. Ihe nlereanya a bụ naanị ụdị ihe abụọ na-ahụkarị. Ihe mbụ bụ ịhụ kpakpando na Anyanwụ.Ọ dị mfe ileba anya na mbara igwe ma hụ otu ụbọchị, ha na-aga ije n’eluigwe. N'ụzọ dị otú a, ọ na-enye mmetụta na ọ bụ thatwa ka edoziworo na akụkụ ndị ọzọ nke eluigwe na-agagharị.
Nke abuo, anyi choputara uzo nke onye nlere. Ọbụghị naanị na ọ dị ka akụkụ ndị ọzọ megharịrị na mbara igwe, mana ụwa adighi acho ije. Ha kwọrọ ụgbọ na-aga n’enweghị mmetụta na-agagharị.
N'ime narị afọ nke atọ BC, e chere ụwa ka ọ dị mbadamba. Agbanyeghị, ụdị Aristotle ndị a tinyere eziokwu ahụ bụ na ụwa anyị dị okirikiri. Ọ bụghị ruo mgbe ọbịbịa nke onye na-enyocha mbara igwe bụ Claudius Ptolemy na edoziri nkọwa nke udi nke mbara ala na Anyanwụ. Ptolemy rụrụ ụka na waswa dị n'etiti etiti Eluigwe na Ala na kpakpando niile dịkwa obere site na etiti ya.
Copernicus tụrụ ụjọ ịbụ onye Chọọchị Katọlik ga-atụ mkpọrọ mere ka ọ kwụsị nnyocha ya ma ghara ibipụta ya ruo oge ọ nwụrụ. Ọ bụ mgbe ọ na-achọ ịnwụ mgbe o bipụtara ya n’afọ 1542.
Nkowa akparamagwa nke mbara ala
Planetwa ọ bụla na usoro ihe a nke onye na-enyocha mbara igwe chepụtara na-akpali usoro nke ngalaba abụọ. Otu bụ nke na-adọrọ adọrọ ma nke ọzọ bụ okirikiri. Nke a pụtara na ndị ahụ na-ahụ n'anya bụ okirikiri nke ewepụrụ etiti etiti ha n'uwa. Ejiri nke a kọwaa ọdịiche dị n'etiti ogologo oge ọ bụla. N'aka nke ọzọ, a na-agbanye okirikiri ahụ na ebe dị egwu ma na-eme dị ka a ga-asị na ọ bụ ụdị wiil dị n'ime wiil ọzọ.
A na-eji epicycle akọwa na retrograde ngagharị nke mbara ala ndị dị na mbara igwe. Enwere ike ịhụ nke a ka ha na-ebelata ma na-ala azụ iji nwayọ nwayọ nwayọ.
Ọ bụ ezie na tiori a akọwaghị omume niile a hụrụ na mbara ala, ọ bụ nchọpụta na rue taa enyerela ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị aka dịka ntọala nke ọmụmụ nke Eluigwe na Ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Kedu ihe bụ na olee otu usoro heliocentric si arụ ọrụ?
Oge ọkọchị nke San Miguel